Meizu 16s Pro pụtara na Geekbench na Snapdragon 855 Plus | Gam akporosis
Meizu na-akwado flagship ọhụrụ ya iji kụrụ ahịa n’oge na-adịghị anya. Nke a bụ Meizu 16S Pro, na ọtụtụ izu ọ na-eme ozi ọma dịka akụkụ nke ọtụtụ mkpọpu mmiri nke na-ekpughe ya nke nta nke nta.
A ga-ewepụta ama nke a Na-esote August 28 site n'aka otu onye nrụpụta ahụ, ya mere anyị ga-ezute ya. Agbanyeghị, ekele maka akụkọ ndị gara aga na ozi ohuru nke Geekbench wetara anyi, Ọ bụghị iwu na anyị ga-ewepụta ya n’ihu ọha ka anyị mata ihe ọ ga-edobere anyị. Ka anyị lee ihe akara aka depụtara na ya n'oge a ...
A na-atụ anya nke ukwuu na Meizu 16S Pro, ebe ọ na-eburu ya Snapdragon 855 Plus Qualcomm n'ime. Ngwa, ejiri gosipụta SoC na ngwaọrụ ya dị na ndepụta nke Geekbench wepụtara n'oge na-adịbeghị anya, yana A gam akporo achịcha sistemụ na 8GB Ram.
Meizu 16s Pro na Geekbench
Ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ a nwetara na otu-isi na ọtụtụ isi nyocha bụ 3,570 na 9,493, n'otu n'otu. Nke a, iji gosipụta SoC na ọ ga-akwadebe, yana isi ugboro ole otu ihe ahụ ọ debanyere aha, na-aga n'ihu na-agwa anyị na chipset chipset ndị ahụ edepụtara bụ nke a ga-etinye n'ime nsị nke ngwaọrụ ahụ.
Dabere na akụkọ ndị gara aga, n'ozuzu imewe nke Meizu 16S Pro bụ ihu ọma ahụ dị ka 16. Ọ naghị eji ihuenyo perforation ma ọ bụ ọkwa ọhụụ. Na mgbakwunye, ọ na-eji ihuenyo mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,232 x 1,080 nwere nhazi okpukpu atọ n'azụ. Ke adianade do, dị ka a na-adịbeghị anya ihihi, na ihuenyo nke a ama tụrụ ihe dị ka 6.4 sentimita asatọ. Nke a bụ ihe hà nha ka Meizu 16.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 16S Pro ejirila Geekbench weghaara ya na ụfọdụ nkọwa ya